एलर्जीबाट जोगिन बदाम :: ABC NEWS
एलर्जीबाट जोगिन बदाम
ABC News शुक्रबार,७ माघ २०७३ स्वास्थ्य/जीवन शैली 0
-बालबालिकालाई एलर्जीबाट जोगाउन तिनलाई बालककालमै बदाम खुवाउनुपर्ने केही शोधकर्ताहरूको दाबी छ । चार महिनाको उमेरदेखि नै बालबालिकाहरूलाई बदाम खुवाए तिनलाई एलर्जी नहुने बताइएको हो । यो कुरा अमेरिकामा भएको नयाँ शोधपछि खुलासा भएको हो । शोधले देखाएअनुसार शिशुवस्थामा नै बदाम खुवाइँदा ८० प्रतिशतले शिशुहरूमा हुने एलर्जीलाई घटाउन सहयोग हुने बताइएको छ । यो अध्ययन ‘द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज’ले गराएको थियो । संस्थाले यो पत्ता लगाउनुलाई महŒवपूर्ण खोज भनेको छ ।
हुन त शिशुलाई बदामको पूरै दाना खान दिनु हुँदैन किनभने त्यो अड्किने सम्भावना हुन्छ । तर नअड्किने गरी खुवाउन सके र नियमित रुपमा खुवाए एलर्जी कम गर्न सकिने देखिएको हो । अमेरिकामा एलर्जी क्रमशः बढिरहेको छ । सन् २००८ को तुलनामा यतिबेला चार गुणाले एलर्जी बढेको विभिन्न शोधले देखाएको हो ।
एलर्जी बढ्ने क्रम पश्चिमी देश मात्र होइन, एसिया र अफ्रिकामा पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरिका अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा बदाम खुवाएर ढुक्क हुन सकिने अवस्था आउनुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् । अहिलेसम्म तीन वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई बदाम नखुवाउँदा राम्रो भनिदै आइएकोमा यस अध्ययनपछि जति चाँडो बदाम खुवायो, उति राम्रो हुने देखिएको हो ।
नयाँ अध्ययनले भन्छः
अन्य किसिमका एलर्जी र गम्भीर किसिमको एक्जिमा भएका बालबालिकालाई मेडिकल निगरानीमा बदामयुक्त खाद्यसामग्री खुवाउनु पर्छ ।
हल्का एक्जिमा भएका बालबालिकालाई पनि बदामयुक्त खाद्य सामग्री दिँदा राम्रो हुनेछ ।
कुनै बालबालिकालाई एक्जिमा वा एलर्जी जस्ता कुनै पनि किसिमका समस्या नभएको खण्डमा बदामयुक्त खानेकुरा दिन सकिन्छ ।
नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजका निर्देशक डा। एन्टनी फाउसी भन्छन्, ‘हामीले बदाम खुवाउनुस्, एलर्जी भगाउनुस् भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ । यदि यो अभियान साँच्चिकै सफल पार्न सकिए एलर्जी फैलनबाट रोक्न सक्छौँ । खासगरी अमेरिकामा एलर्जी वृहद्स्तरमा बढिरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तै किसिमका अभियानले सघाउ पु¥याउन सक्छन् ।’
युरोपियन एकेडेमी अफ एलर्जी एन्ड क्लिनिकल इम्युनोलजीका सदस्य माइकल वालकर भन्छन्, ‘नयाँ अध्ययनले देखाएका कुरा अध्ययनमा आधारित हुन् । यस्ता कुरा बेलाय मात्रै होइन, अन्य देशले पनि अपनाउनु आवश्यक छ ।’
इम्पेरियल कलेज लन्डनका प्राध्यापक अलान बुबिज भन्छन्, ‘पहिले चाहिँ एलर्जी कम गर्ने सबै किसिमका खाद्यसामग्रीहरू बालबालिकालाई ढिला गरी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो तर यो अध्ययनले त्यस किसिमको सोचलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।’ बिबिसी
फलफुलका मौसम !
गर्मि मौसम शुरु भएको छ । तात्तिएको मौसमका कारण काम गर्ने जोस–जाँगरमा पनि कमी आउँछ भने बिहान अबेरसम्म सुत्न मन… मंगलबार,१२ बैशाख २०७४
नियमित अंगुर खादा हुने फाईदाहरु
काठमाडौं । अंगुरको नियमित सेवनका अनेक फाइदा छन् । यसले तपाईको सुन्दरतासँगै स्वास्थ्यमा समेत राम्रो गर्छ । अंगुरमा भिटामिन, पोटाशियम,… बुधबार,३० चैत्र २०७३
यसरी हटाउनुस कपालको चाया !
काठमाडौं—कपालमा चाया पर्ने गुनासो अधिकांशको हुन्छ । महिला या पुरुष दुवै चायाले पीडित हुन्छन् । लामो कपाल हुने भएकाले तुलनात्मक… सोमबार,१४ चैत्र २०७३
गर्मी मौसम्मा हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’का गर्भवती विशेष सचेत हुनुपर्ने
काठमाडौँ । गर्मीको समय सुरु भइसकेको छ । यो समयमा जाडोमा भन्दा मानिस विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यो मौसममा… शुक्रबार,४ चैत्र २०७३